ဒီတစ်ခါတကယ်ချစ်မိသွားပြီဆိုတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း - Cele Connections
ဖြူဖြူကျော်သိန်းဟာ ဂီတရေစီးကြောင်းပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ ပရိသတ်အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိနေတဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ သီချင်းဆိုတဲ့အခါ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းစာသားတစ်ကြောင်းစီတိုင်းကို ရသမြောက်အောင် ဖန်တီးသီဆိုနိုင်သူဖြစ်လို့ သူမရဲ့ထွက်ရှိခဲ့သမျှ တေးသီချင်းတွေကလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပါ။ ဖြူဖြူဟာ တေးသီချင်းသီဆိုတဲ့နေရာမှာသာ ထူးချွန်တာမဟုတ်ဘဲ ပညာရေးမှာလည်း အများက လေးစားချီးကျူးရတဲ့ ဆရာဝန်ဘွဲ့ကိုပါ ရရှိထားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလတ်တလော ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်နေတဲ့ Myanmar Idol Season 4မှာလည်း အကဲဖြတ်ဒိုင်တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်ထားပါသေးတယ်။
ဖြူဖြူဟာ သူမရဲ့ အတွေးအခေါ်အမျှော်အမြင်တွေကို စကားလုံးတွေအဖြစ်အသွင်ပြောင်း ပြောဆိုတဲ့အခါမှာလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် မှတ်သားစရာတွေ ပါနေတတ်တာမို့ ပရိသတ်တွေက မှတ်သားအတုယူနေကြတာပါ။ ဖက်ရှင်ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေနဲ့ ပရိသတ်ကိုဖမ်းစားလေ့ရှိတဲ့ အပျိုကြီး ဖြူဖြူတစ်ယောက် နှလုံးသားအရေးကိုတော့ သိုသိုသိပ်သိပ်နဲ့ ကွယ်ဝှက်ထားတတ်ပါသေးတယ်။ မကြာသေးခင်က သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ “ချစ်လိုက်တာ။ သိပ်ချစ်တာပဲ။ တအားကိုချစ်။ ဒီတစ်ခါတကယ်ကို ချစ်မိသွားတာ” လို့ ရေးသားခဲ့ပြီး ပရိသတ်ရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားခဲ့တာပါ။ အဲဒီစာကြောင်းလေးရဲ့ ဟိုးအောက်ဆုံးမှာတော့ “ကိုယ့်ဘာကိုယ် ပြောတာ”… ဆိုပြီး ထပ်ရေးခဲ့ပြန်တာမို့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲ ခိုးလုခုလုဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
စာသားလေးရဲ့အဆုံးမှာတော့ အပျိုကြီးဖြူဖြူရဲ့အချစ်ရေးကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ပရိသတ်တွေက ဂျင်းထည့်ခံရမှန်းသိပြီး စနောက်တဲ့မှတ်ချက်တွေ ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Cele Connectionsပရိသတ်ကြီးကလည်း ဖြူဖြူကို အပျိုကြီးဘ၀ကနေ ကျွတ်စေချင်ကြပြီလား??? မှတ်ချက်လေးတွေ ပေးခဲ့ပါဦးနော်။
ဖွူဖွူကြျောသိနျးဟာ ဂီတရစေီးကွောငျးပျေါမှာ ကိုယျပိုငျဟနျ ကိုယျပိုငျစတိုငျနဲ့ ပရိသတျအားပေးခဈြခငျမှုကို ရရှိနတေဲ့ နိုငျငံကြျောအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ သီခငျြးဆိုတဲ့အခါ အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ သီခငျြးစာသားတဈကွောငျးစီတိုငျးကို ရသမွောကျအောငျ ဖနျတီးသီဆိုနိုငျသူဖွဈလို့ သူမရဲ့ထှကျရှိခဲ့သမြှ တေးသီခငျြးတှကေလညျး ဒိတျဒိတျကွဲအောငျမွငျမှုတှရေရှိခဲ့တာပါ။ ဖွူဖွူဟာ တေးသီခငျြးသီဆိုတဲ့နရောမှာသာ ထူးခြှနျတာမဟုတျဘဲ ပညာရေးမှာလညျး အမြားက လေးစားခြီးကြူးရတဲ့ ဆရာဝနျဘှဲ့ကိုပါ ရရှိထားသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အခုလတျတလော ထုတျလှငျ့တငျဆကျနတေဲ့ Myanmar Idol Season 4မှာလညျး အကဲဖွတျဒိုငျတဈယောကျအဖွဈ ပါဝငျထားပါသေးတယျ။
ဖွူဖွူဟာ သူမရဲ့ အတှေးအချေါအမြှျောအမွငျတှကေို စကားလုံးတှအေဖွဈအသှငျပွောငျး ပွောဆိုတဲ့အခါမှာလညျး ပရိသတျတှအေတှကျ မှတျသားစရာတှေ ပါနတေတျတာမို့ ပရိသတျတှကေ မှတျသားအတုယူနကွေတာပါ။ ဖကျရှငျဆနျးဆနျးပွားပွားတှနေဲ့ ပရိသတျကိုဖမျးစားလရှေိ့တဲ့ အပြိုကွီး ဖွူဖွူတဈယောကျ နှလုံးသားအရေးကိုတော့ သိုသိုသိပျသိပျနဲ့ ကှယျဝှကျထားတတျပါသေးတယျ။ မကွာသေးခငျက သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ “ခဈြလိုကျတာ။ သိပျခဈြတာပဲ။ တအားကိုခဈြ။ ဒီတဈခါတကယျကို ခဈြမိသှားတာ” လို့ ရေးသားခဲ့ပွီး ပရိသတျရဲ့ အာရုံကိုဖမျးစားခဲ့တာပါ။ အဲဒီစာကွောငျးလေးရဲ့ ဟိုးအောကျဆုံးမှာတော့ “ကိုယျ့ဘာကိုယျ ပွောတာ”… ဆိုပွီး ထပျရေးခဲ့ပွနျတာမို့ ပရိသတျတှရေငျထဲ ခိုးလုခုလုဖွဈကနျြရဈခဲ့ပါတယျ။
စာသားလေးရဲ့အဆုံးမှာတော့ အပြိုကွီးဖွူဖွူရဲ့အခဈြရေးကို စိတျဝငျစားနတေဲ့ ပရိသတျတှကေ ဂငျြးထညျ့ခံရမှနျးသိပွီး စနောကျတဲ့မှတျခကျြတှေ ပေးခဲ့ကွပါတယျ။ Cele Connectionsပရိသတျကွီးကလညျး ဖွူဖွူကို အပြိုကွီးဘဝကနေ ကြှတျစခေငျြကွပွီလား??? မှတျခကျြလေးတှေ ပေးခဲ့ပါဦးနျော။
ကိတ်တာမဟုတ်ဘူး ဝတာလို့ပြောနေတဲ့သူတွေကို ပညာသားပါပါတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ မေပန်းချီ
ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့လေးကို ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်ရင်း ကုသိုလ်တွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ စွမ်းဇာနည်